प्रचण्ड र विप्लवको प्रवृत्ति एउटै हो माघ आठमा पाइन्न, पाए पनि चाहिन्न – मोहन वैद्य « Today Khabar
प्रचण्ड र विप्लवको प्रवृत्ति एउटै हो माघ आठमा पाइन्न, पाए पनि चाहिन्न – मोहन वैद्य
प्रकाशित १९ पुष २०७१, शनिबार १०:१६
० नेत्रविक्रम चन्दले तपाईंजस्ता नेतालाई छोड्नुभयो, किन होला ?
– मोहन वैद्य भन्ने व्यक्ति मन नपरेर उहाँले हाम्रो साथ छोड्नुभयो होला जस्तो लाग्दैन, तर उहाँ यतिबेला हामीबाट अलग रहेको घोषणा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ– उहाँले अलिक हतार गर्नुभयो। नेतृत्वको लागि यसरी हतारिनु आवश्यक थिएन। कहिलेकाहीँ अनपेक्षित कुरा हुन्छ, विप्लवजी अलग भएको कुरा पनि यस्तै हो। विगतमा पनि यस्तो नभएको होइन, भएकै हो। तुल्सीलाल, पुष्पलालजीहरूसँग यस्तै भएको हो, मोहनविक्रमजी, लामाजी ९निर्मल लामा०हरूसँग पनि त्यस्तै भयो। तर हामी फेरि जुट्यौँ पनि र पुनः विभाजन पनि भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्तै आरोह–अवरोहका बीच अघि बढ्ने गर्छ। जे होस्, विप्लवजीलाई अझै पनि गल्ती–कमजोरी सच्याएर साथै आउनुस् भनेका छौँ हामीले।
० विप्लवजीले त मोहन वैद्यजस्ता बुढा नेताहरूको अब काम छैन भन्नुभएको छ नि ?
– उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो होला– ठिकै छ। तर, नेतृत्व भन्ने कुरा बुढाखाडा र तन्नेरी भन्ने भन्दा पनि विचारले गर्ने कुरा हो। अर्को कुरा कम्युनिष्ट पार्टीको मान्यता के पनि छ भने तीन पिँढीलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने छ। युवा, प्रौढ र वृद्ध तीनै पिँढीलाई समायोजन गरेर जानुपर्छ। यसले मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सुदृढ तुल्याउँछ। यो कुरालाई सम्बन्धित सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ।
० पार्टीभित्रको युवा पिँढीलाई तपाईंले प्राथमिकतामा नराखेर यस्तो समस्या पैदा भएको हो कि?
– होइन। मैले त युवालाई सदा प्राथमिकता र महत्त्व दिँदैआएको छु। हाम्रो पार्टीमा त युवा पिँढीकै बाहुल्य छ र युवा पिँढी नेतृत्वमा आइहाल्ने सम्भावना पनि हाम्रो पार्टीमा प्रचुर छ। जे होस्, सबै पिँढीलाई उचित सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।
० नेत्रविक्रम चन्दले लिएको बाटोसँग तपाईंको सहमति हुन सक्दैन होइन त?
– छलफल–बहस गरेर अघि बढौँ भनेर भन्दाभन्दै त्यसरी हिँड्ने रवैयाप्रति कसरी सहमत हुनेरु महाधिवेशनमा जाऔँ र त्यहँबाट सबै समस्या र असमझदारीको हल निकालौँ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। हाम्रा कार्यदिशा, कार्यनीति आदिलाई परिमार्जन गरी समृद्ध तुल्याएर जाने हो भनेकै थियौँ हामीले। तर विप्लवजीले अलिक हतार गर्नुभयो।
० त्यसोभए बिग्रेको कम्युनिस्ट हुन् त नेत्रविक्रम चन्द ?
– उहाँमा अलिकता विचलन आएको छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो विचलन उहाँले सच्याउनै पर्छ, नसच्याए आन्दोलन गलत दिशामा जान्छ। यहीँ बसेर बहस गर्दा सच्चिने–सच्याउने मौका आउँथ्यो, तर उहाँ त हिँडिहाल्नुभयो। हिँडिहाले पनि उहाँ र उहाँको समूहसँग कमी–कमजोरी सच्याउँदै फेरि एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने हाम्रो अनुरोध रहन्छ।
० विप्लवजीहरू त परिआए फेरि हतियार उठाउने कुरा पनि गर्दैहुनुहुन्छ, यतिबेला हतियार उठाउनुचाहिँ कत्तिको जायज होला नि ?
– हतियार नै उठाउने कुरा गरेजस्तो त लाग्दैन। हतियार उठाउने भनेको त ऐतिहासिक आवश्यकताको कुरा हो। क्रान्ति र रुपान्तरको निम्ति बल प्रयोगको सिद्धान्त अपनाउने कुरा आउँछ इतिहासमा। कुनबेला आवश्यक हुन्छ या हुँदैन भन्ने त परिस्थितिसापेक्ष हुन्छ। परिस्थितिले नमागेसम्म त्यत्तिकै हतियार उठाउने कुरा त सुहाउँदो हुँदैन।
० प्रचण्डजीले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कुरा गर्न थाल्नुभएको छ, शान्तिबाटै क्रान्तिको उद्देश्य पूरा गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँ, तपाईं पनि यस्तै भन्दैहुनुहुन्छ कि कसो ?
– प्रचण्डजीको कुरा फेरि अलग्गै हो। शान्तिपूर्णको रट लगाएर प्रचण्डजी पुरानै सत्ताको मार्ग अनुशरण गर्न पुग्नुभएको छ। त्यही तरिकाले गए त विप्लवजीले पनि केही गर्नसक्ने कुरै आउँदैन। तर, गहिरिएर विचार गर्दा विप्लवजीको बाटो र प्रचण्डजीको बाटो वास्तवमा एउटै हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अन्तत्त्वगत्वा उहाँहरू दुबैको मार्ग वा प्रवृत्ति एउटै नै हो। कुरा गराई र प्रस्तुतिमा तत्काल फरकजस्तो देखिए पनि भविष्यमा गएर उहाँहरूको प्रवृत्ति एउटै देखिनेछ।
० तपाईंको पार्टी अब विशेष महाधिवेशनतर्फ लागेको हो ?
– महाधिवेशनमा त जानैपर्ने देखियो। पार्टीमा उत्पन्न छलफल, बहस र पछिल्ला विविध उतारचढावका घटनालाई विश्लेषण गरी पार्टीलाई पूर्णता दिनका लागि महाधिवेशन आवश्यक हुन गएको छ।
० विप्लवहरूले पनि विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए, त्यहीबेला किन सुनुवाई नगरेकोरु कतै यही कारणले विप्लवजीहरू टाढिएका हुन् कि ?
– उहाँहरूले माग गरेबमोजिम महाधिवेशन गर्ने भनेकै थियौँ हामीले। विप्लवजी समेत भएर निर्णय गरिएको हो। तथापि, उहाँ किन यसरी हतारिनुभयो कुन्नीरु१ तर, अझै पनि आउनुहोस्, महाधिवेशनमा जाऔँ भनी हामी आग्रह गरिरहेकै छौँ। आउने–नआउने त उहाँकै तजबिजको कुरा भयो, तर हाम्रो आग्रह जारी छ। महाधिवेशनले जे पारित गर्छ त्यसैअनुसार हुने भएकोले ‘आउनुहोस् महाधिवेशनमा सँगै जाऔँ’ भन्नेमा हाम्रो जोडदार आग्रह छ विप्लवजीहरूलाई।
० विशेष महाधिवेशनमार्फत् तपाईं नेतृत्वबाट हट्दैहुनुहुन्छ होर ?
– नेतृत्व हस्तान्तरणकै कुरा त अहिले नै कसरी गर्ने१ तर, सबै पिँढीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अपरिहार्यता त छँदैछ। सधैंभरि एउटै मान्छे नेतृत्वमा बसिरहने भन्ने त सवालै रहँदैन। मूल नेतृत्वमा म धेरै बसेको पनि छैन र बस्ने पनि होइन। यस सम्बन्धमा महाधिवेशन बैठकमा छलफल र सरसल्लाह भइहाल्छ।
० माघ ८ गते मुलुकले संविधान पाउने–नपाउने सवालमा चाहिँ तपाईंको जवाफ के छ नि ?
– सरकारमा भएका पार्टी र संविधानसभामा भएका दलहरूले नै माघ ८ मा त अब संविधान आउँदैआउँदैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने हाम्रो त के कुरा रह्यो ररु भन्नैपर्दा चाहिँ माघ ८ मा मुलुकले संविधान पाउँदैन भन्ने नै लाग्छ।
० संविधान आयो भने चाहिँ तपाईंहरूको समर्थन रहन्छ कि रहँदैन नि ?
– त्यसको त हामीले विरोध नै गर्छौं नि। यसरी आउने संविधान हामीलाई चाहिन्न। यो संविधानसभा त विघटन नै गरिनुपर्छ भन्ने हामीले जो भन्दै आएका छौँ, यो भनाई कायम नै छ। अझै पनि सबै पक्षसँग छलफल, बहस या संवाद गरी सबैलाई समेटेर सहमतिका आधारमा संविधान बनाउनेतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा नै सबभन्दा उपयुक्त छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यो संविधानसभाबाट समस्या निकासको काम नहुने भएकोले सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको अपरिहार्यताको वकालत झन् चर्को रूपमा गर्न चाहन्छौँ हामी। हामीलाई उपेक्षा गरेर आउने संविधान कसरी हामी मानौँला तरु संविधान आएमा हाम्रो त विरोध रहन्छ–रहन्छ। जनसंविधान चाहिन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा सार्वजनिक भएकै छ, यसैका लागि वर्तमान संविधानसभाले ल्याउने संविधानप्रति हाम्रो विमति रहन्छ।
विक्लीनेपालबाट साभार गरिएको